Hagaaji Ubuntu: Ka taxaddar arimahaaga gaarka ah | Laga soo bilaabo Linux
Waxaan ku aragnaa sheekooyin argagax iyo qarsoodi meel kasta. Akhrinta RSS-kayga waxaan ku ogaaday taas Canonical waxay adeegsaneysaa CopyRight oo leh astaanteeda si loo faafreeco dhaleeceynta loo jeedinayo Ubuntu, wax aan hore u dhicin.
Sheekadu waa tan soo socota, Miikaah Lee, milkiilaha degelka Ubuntu hagaaji, wuxuu soo saaraa koodh lagu tirtirayo raadinta khadka tooska ah oo ay kujirto nooca cusub ee Midnimada iyo in sida dad badani qabaan, ay ku xad gudubto asturnaantooda.
Waa maxay dhibaatadu? Waa hagaag waxa Miikaah Lee, loo isticmaalay magaca iyo astaanta Ubuntu boggaaga, wax dad badani ogyihiin, kumanaan goobood iyo baloogyo ayaa sameeya.
Laakiin hadafka ah Ubuntu hagaaji waa in meesha laga saaro shaqeynta Midnimada, oo ka warbixisa macaashka Canonical, maadaama ay ka mamnuuceen adeegsiga astaanta, iyo xitaa erayga / magaca Ubuntu.
Waqtigan la joogo Miikaah wuxuu horeyba uga saaray astaanta, laakiin wuxuu hayaa magaca, sidoo kale halkan ayey ku sharxayaan.
Maxay kula tahay Aniga dhankeyga, waxaan siinayaa Mr. Miikayga +1000 ee la wadaagga iyo rabitaanka ilaalinta asturnaantayada iyo Kanonikalka, sida uu u qaato -1.
0.1 Fulinta qoraalka
1 Maxay tani qabanaysaa?
Asal ahaan waxa kaliya ee aan sameyno waa furitaanka terminal oo aan socodsiino:
gsettings set com.canonical.Unity.Lenses lens-fog-raadinta-midna; haddii [`bisad / iwm / lsb-sii deynta | salaax DISTRIB_RELEASE | jar -d "=" -f2` \_ <'13.10 .1 ']; ka dib sudo apt-get saar -y midnimada-lens-shopping; kale gatestings ayaa dhigay com.canonical.Unity.Lenses oo naafo ah - "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u127.0.0.1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions- ebay.scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] "; fi; sudo sh -c 'echo "XNUMX productsearch.ubuntu.com" >> / etc / host';
Maxay tani qabanaysaa?
gsettings set com.canonical.Unity.Lenses remote-content-search none Waxay fureysaa «baaritaanka fog», taas oo ah, baaritaanku uma baahna internetka
gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay.scope', 'more_suggestions-ubuntushop.scope', 'more_suggestions-skimlinks.scope']" Jooji muraayadaha kale ee loo yaqaan 'Dash lenses' ee waliba gala internetka
sudo apt-get remove -y unity-lens-shopping Ka tirtir muraayadaha 'Amazon'
sudo sh -c 'echo "127.0.0.1 productsearch.ubuntu.com" >> /etc/hosts' Xir xiriirada serverka xayeysiiska Ubuntu, hadiiba ay dhacdo
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Dayactir Ubuntu: Ka taxaddar arimahaaga gaarka ah
Taasna, iyo sabab kale (macno ahaan qunyar socod .deb xirmo), kama soo guurin Debian.
Aniga maahan Windows 8
Ku jawaab flexo
Ah wanaagsan. Xaqiiqdii waxaad horeyba u cusbooneysiin laheyd 8.1.
Waqtigan xaadirka ah wali waxaan ku jiraa Windows 8. Way shaqeysaa si fiican, waan "baabi'iyay" habka metro mahadsanidiisa bilowga 8, Windows 8.1 lafteeda waa OS cusub laakiin kaliya waxaa lagu hagaajiyaa metro (hada modernui). Looma baahna, wax yar baa ka hooseeya markay wax waliba si hagaagsan u shaqeeyaan, haddii ay ahaan lahayd adeeg adeeg dabcan durba waad rakibi lahayd.
Maaha inay ahaato curmudgeon, laakiin runtu waxay tahay in Windows 8, xitaa haddii ay leedahay8 ama nooc kale oo la mid ah, ma jecli. Weli waxaan la shaqeeyaa Windows Vista SP2 iyo Windows 7, markaa wax dhib ah ma qabin.
Jidka, Windows xirmooyinka adeegga mar dambe looma yeeri doono SP1, laakiin ku imow sida loo cusbooneysiiyo Linux (hadda, Windows 8.1 waxaa ku jira batoonka bilowga ee kuu kaxeynaya guddiga bilowga xun)
Laakiin haddii aan isticmaalo Ubuntu, waa tan kaliya ee aan ku soo ururin karo darawalka kaarkayga shabakadda shabakadda WIFI labadaba qaabka tooska ah iyo rakibidda nidaamka. Waa wax lagu qoslo, laakiin mid debian ah, ama fedora ah, ama Openuse, ama arch midkoodna ma haysan taageero software ah oo lagu rakibay si loo soo ururiyo. Haha. Waxayna siiyeen horumarsan ...
Maxaa dhacaya ayaa ah in shaqooyinkani aan lagu rakibin si caadi ah, markaa waa inaad rakibtaa yutiilitiryadan ka hor intaadan bilaabin ururinta.
Dhankeyga, waxaan isticmaalaa Debian maxaa yeelay waxay si dhaqso leh u baakadeysaa xirmooyinka .deb mana haysto wax cabasho ah.
Oo ma waxaa kaliya loogu talagalay Ubuntu ama soo-saarkeeda sidoo kale? (Linux Mint, ElemetaryOS, iwm)
Waxaan u maleynayaa oo kaliya ubuntu tan iyo markii taasi saameyn ku yeelato Midnimada aan ogahay.
Hadda hadday kashifaan ... Markii ay lacag ka quustaan ​​waxay ilaabaan mabaadi'dii ...
Kuma dhicin inaan qoraal ku sameeyo tan maxaa yeelay marhore waan ka xanaaqay isbeddelka ku yimid faallooyinka youtube.
Vimeo waa codka. Mar dambe kalsooni kuma qabtid YouTube-ka (dabcan hadaad rabto inaad ahaato qof shakhsiyan ah).
Wixii aan soo galiyo, waan ka shakisanahay. Waxaan soo geliyaa waxyaabo badan oo xuquuqda guurinta ah.
Waxyaabaha ka soo baxa ubuntu sida lubuntu, kubuntu iyo xubuntu, qoraalkan ma lagu dhaqmi karaa? Mise looma baahna?
Ku jawaab Spartan
Xidhmada midnimo-lens-shopping waxay ka jirtay ubuntus kii ugu horreeyay ee amazon, hadda waxay ku jirtaa midnimada-baaxadda, haddii laga saaro, liiska midnimada ayaa waayi kara shaqadiisa. Waxaan aadi lahaa dookhyada> asturnaanta> raadinta, halkaas oo shaqooyinka khadka tooska ah looga hawlgalo. ka dib xiro fadhiga oo dib u bilow mar kale, gal qunsuliyada iyo «sudo netstat | ka yar »eeg haddii isku xidhka kaniisadaha wali muuqanayo. Uguyaraan kiiskeyga, markale dib uma dhibsan. Waxyaabaha kale ee aan heli lahaa ayaa ah talooyinkaas firefox-ku ka sameeyo toobiyeyaasha loo maro youtube-ka. Taas waxaa lagaa saarayaa aaladda midnimada midowga.
PS: in "productsearch.ubuntu.com" ilaa / etc / martida loo yahay waxtar la'aan, maxaa yeelay maahan cinwaanka kaliya ee aad u isticmaasho weydiinta ( http://askubuntu.com/questions/135602/i-have-permanent-connections-to-canonical-servers-what-are-they-for-and-how-can ). Ha u adeegsato «sudo netstat | ka yar »inta aad wax ka raadinayso midnimo si aad u aragto waxa isku xidhka runti yihiin,
Waxa Canonical ay sameysay ayaa kafiican laba xagal: waa sharci sharci waana doqonimo. Dabcan, looma baahna qareenno aaminsan inay inteena kale yihiin doqomo doqon ah oo aynaan kala soocin farqiga u dhexeeya sharciga, anshaxa iyo anshaxa.
Kuwa ku adkeysanaya in Canonical ay xaq u leeyihiin in ay dacweeyaan qof kasta oo adeegsada sumadda ganacsiga ee ay diiwaangeliyeen Koonfur Afrikaanka iyaga oo aan raalli ka ahayn waa sax, laakiin way ku qaldan yihiin akhrinta xaaladda… dhibaatadu sharci ma ahan; waa xaalad dano gaar ah laga leeyahay, oo Canonical ay go'aansatay inay iska dhigto sidii arrin maxkamadeed.
Waxaa jira kuwa si qalad ah isbarbardhigaya kiiskan iyo kan Mozilla Foundation vs Debian, waana qaldanyihiin maxaa yeelay bilowgii macnaha guud iyo sababihii dhaliyay khilaafka aad ayey u kala duwan yihiin. Canonical ma weydiisanayo in astaanteeda astaanta loo isticmaalo si sax ah sida Mozilla u sheegatay waqtigaas, Canonical waxay dooneysaa in sumadeeddeeda AAN la isticmaalin iyo, dusha sare ee cynicism, xitaa ereyga ubuntu.
Canonical ayaa durbadiiba qashinkooda dabiiciga ah ku dul tuuray marawaxada waxayna helayaan dhamaan wixii wasakhdaas uraya laf ahaantooda ah, maxaa yeelay aad ayey ugu adkaan doontaa inbadan oo naga mid ah inaynaan u maleyneynin inay tani tahay mid gaar ah. Aniga ahaan waa kiis cad oo faafreeb ah, in kasta oo qareennadu sheegaan in adeegsiga ereyga «faafreebid» ay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qaldan tahay, maxaa yeelay, sida Elav leeyahay, boqollaal, iyo laga yaabee kumanaan, goobood ayaa adeegsanayay astaanta astaanta Ubuntu illaa sannado, qof kastaa wuu ogyahay oo Canonical weligeed kuma dhaqmin xuquuqda lahaanshaha sheegasho kasta ... illaa hadda waxay taabteen danahooda.
Waxaan qabaa, sidaa darteed waan jiraa.
Tarjumaadaha macquulka ah ee ereyga Ubuntu ee Isbaanishka:
"Bini'aadamnimada dadka kale"
"Waxaan ahay maxaa yeelay waxaan nahay"
"Qofku wuxuu ku noqdaa aadanaha dad kale"
"Qofku waa qof dad kale awgood"
«Wax walba oo taydu waa iska leh qof kasta»
Waxaan ahay waxa aan ku saleysanahay waxa aan wada nahay "
"Rumaysadku waa isku xidhka guud ee wadaagga kaas oo isku xidha dhammaan aadanaha."
Heer sare Macnaha guud ee Mozilla iyo Debian wuu ka duwanaa, maxaa yeelay shuruudaha Mozilla waxay ahaayeen kuwo aan la jaan qaadi karin tilmaamaha barnaamijka bilaashka ah ee Debian. Halkaas, si looga fogaado cabashooyin badan oo aan loo baahnayn, waxay foorjiyeeyeen Firefox waxayna ugu yeereen Iceweasel inay ka soo horjeeddo aqoonsiga muuqaalka (marka lagu daro, FSF ayaa ahaa kii abuuray magaca Iceweasel, laakiin maadaama ay doonayeen inay ka fogaadaan cabashooyin dheeri ah, waxay u bixiyeen fargeetoodii Firefox sida GNU IceCat), marka lagu daro bixinta waxyaabo yar yar sida inaad ku weydiiso haddii aad rabto inaad u dirto xogtaada si loo hagaajiyo tayada biraawsarka (xilligan oo ay sii kordhayso paranoia mahadsanid kiiska NSA / PRISM, oo doonaya inuu kuu soo diro xogta "si qarsoodi ah»?).
Wax walbana waan iska diiwaangeliyaa. Wanaagsan faalladaada.
Waxayna dhaheen maya.
Aynu ku aragno waxa ay wajahayaan kuwa difaacay qodobbadu marka ay dadka kale ku eedeeyaan inay yihiin kooxda shaaha.
Kuwa yiraahda 'CLA' kaniisadaha ma laha ujeedooyin xun midkoodna.
Si la mid ah, kuwa dhaha in loo yeero OS Linux oo dhan © wax dhibaato ah ma qabaan.
Si fudud, wixii ay ku sameeyeen gelinta muraayadaha indhaha ee Midnimo waxay si fudud ugu abuureysaa dhanjaf dadka isticmaala.
Xitaa Nemopunk iyo Google Desktop Search ayaa si aad ah uga shaqeynaya arintaas, sidaa darteed waxaan ogahay in mar kasta oo aan ku qanco in Ubuntu ay kasii darayso.
Waxba kama haysto Ubuntu, waxay ila tahay qaybsi wanaagsan, oo ku jirta nooc adeeg oo heer sare ah, Iyo anigoon tirinayn taageerayaasha (oo aan u gaar ahayn Ubuntu) sidoo kale waxaan jeclahay beesheeda, waxa aanan jeclayn waa qormooyin iyo sidee loo sameeyaa Waan ogahay? Waxay maamushaa, gudeheeda CLA iyo dibaddaba isgaarsiinta ku saleysan beenta, balanqaadyada aan la fulinin iyo sheegashooyinka kuwa aan ku taageerin inay horumariyaan xalalka oo ficil ahaan aan macquul aheyn in lagu fuliyo qeybin kale.
Runta haddii loo sheego, waxa kaliya ee aan runtii uga soo horjeedo Ubuntu waa howsheeda gaabiska ah ee xirmooyinka .deb. Inta kale waxay leeyihiin xal.
Calaamaduhu waxay u degtaa si ka dhakhso badan sida uu nuugo.
Waxaan soo xasuustay halkudhigii dhabta ahaa ee Microsoft: "Ubunsoft: Adigaa Naga Leh" hahaha!
Adigu iima aadan sheegin Briz-kan, waa niyad jab dhab ah, in wax wanaagsan ay ku dambeeyaan in badhida la siiyo koox dhaqaaleedka caadiga ah. Marna kama yaraato dinaar la iibiyo. Xaqiiqdii waxaan u baahanahay inaan u dhowaado lynkintimint.
Ku jawaab si aad u qorto
Waxaan u sheegay inaan badalayo oo aan horeyba u badelay, sidoo kale qalabkaygu wuxuu sifiican ugu shaqeynayaa dheecaanka. Khadka internet-kayga wuu jaray wax yar maadaama router-ka wax yar laga saaray. Wadaagista feylku waxay leedahay qiimayaal ka wareejin ka sarreeya ubuntu, xitaa rakibistu waa cusub tahay. Haddii aan dhihi karo aniga oo door bidaaya shaqada canonikada waxaan bartay Linux-ka oo loo maro ubuntu, runti si dhib ah uma isticmaalo wl win, oo aan ka ahayn kaliya inaan ciyaaro ciyaaro. Waana taas waan ogahay in beddelkayga ka sokow la dagaallanka fayrasku uu ahaa in "winhit" uu kaligiis isku xidhayo 20% xadka ballaadhinta adeeggaaga internetka oo uusan sheegin sababta. Sidoo kale dukumentari aan daawanayay dhowr sano ka hor (5 sano) waa in dhammaan barnaamijyadii aan iska dhiibin arrimaha basaasnimada la iska fogeeyay, kii la siiyayna uu helayo taageero si uu caan uga noqdo. Hadda markii uu Snowden qaawiyey shiishaddii, waxaan aragnaa in shirkado badan ay oggolaadeen in loo oggolaado ficilka noocan oo kale ah oo la siiyay "tigidh" Aan ka hadal, raggii hore waxay dhihi jireen: "Baahida loo qabo waxay leedahay wajiga bidco".
Mark wuu ka qoomameeyay ... waligiis kama daahin ... Laakiin wasakhda mar dambe lama tirtirin oo waxaan u roonnahay la'aanta anshax xumo. Iyo kuwa raaligelinta ka bixinaya, ma ahan inay tahay astaan ​​ganacsi ama xaq u leedahay. Arrintu waa guud ahaan anshax la’aan iyo xeelad ku wajahan arrin dhaleeceyn fudud oo ku aaddan wax aan ka yareyn qalloocan: iyada oo la adeegsanayo iyada oo aan loo digin qofna ku xadgudbo asturnaantayada.
Waa tan jawaabta kaniisadda. Maaha faafreebka laakiin waa calaamadaha ganacsiga ... sidoo kale waa iska caabin wixii ay sameeyaan.
Xitaa hay'adda 'Mozilla Foundation' ayaa aad uga caqli badan astaamaheeda ganacsi.
Wanaagsan! Tabaruc aad u fiican!
Waxaan aaminsanahay in qayb ka mid ah tan mar horeba lagu daray hagaha "Maxaa la sameeyaa ka dib rakibidda Ubuntu 13.10". Waa lama huraan.
Markii aan aqriyay maqaalkan waan iska celin waayey laakiin waxaan u maleynayaa "RSM inuu saxsanaa." Tani waa inay noqotaa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah oo aan ka bixin (taas oo dhanka kale ah mid aad u dhib badan maxaa yeelay waxay isku dhex jirtaa baaritaanno toos ah oo sharci ah - nooca Wikipedia - oo leh raadinta internetka ee ganacsiga - tusaale ahaan)
Aad ayaan uga xumahay aragtida Canonical ee ku saabsan arimahan ... gaar ahaan maadaama loo malaynayo inay horumarin doonaan Linux distro-ka ugu caansan miisaska.
Dagaalada astaan ​​ganacsi ayaa aad ugu gaboobay barnaamijka softiweerka ee Linux (xitaa Linux waa mid kamid ah oo dacwado dhowr ah haysay), RedHat waa laga xusi karaa linuxiso.org, sidoo kale ka dhanka ah cheapbytes -iyo debian / mozilla oo caan ah. Laakiin waxay kaga duwan yihiin kuwii hore oo dhan, halkan waxay isku dayeen inay adeegsadaan farsamo ay ku xayiraan xorriyadda hadalka. Tani maahan xadgudub shati maadaama fixubuntu uusan raadineynin ujeedo ganacsi. Waxay u egtahay inay kaa mamnuuceen bartaada ama boggaaga inaad sheegto. Dhaqdhaqaaqa xun ee Canonical.
Ubuntu Epic Fail.
Haddii Microsoft ay sameysay wax sidan oo kale ah, waxaan horeyba ugu tuuri lahayn iyaga sh ~~
Anigu waxaan ahay isticmaale aamin ah Ubuntu tan iyo noockeedii 9.10, laakiin tallaabadani ujeeddooyinka faafreebka (ha i furin ama waan ku xejin doonaa) ma ilaabi doono!
Kaliya waa i neceb tahay.
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo waqti aan ku galo Debian ... qaar badan oo naga mid ah waxay isticmaalaan Ubuntu maalin kasta sababtoo ah way fududahay ...
Salaan iyo bogaadin booska.
Ku jawaab sebastianbianchini
Ubuntu maahan kaliya distoorka fudud, waxaa jira Manjaro, Mandriva / Mageia, Opensuse oo hadaadan rabin inaad caado ka dhigato .deb waxaad sidoo kale leedahay Linux Mint oo ku saleysan Ubuntu waana isku mid ama ka fudud.
Kaalay, waxa jira distros, oo xitaa waxaa jira kuwo badan oo ku saleysan Ubuntu oo ixtiraamaya asturnaantaada.
Aad ayey ugu xun tahay Ubuntu, laakiin si uun waa inay u kasbato lacag si ay u taageerto horumarinta durugsanaanta, oo hadda xogtaan waxay ku sii jirtaa oo kaliya in laga fikiro laba jeer ka hor inta aan la rakibin Ubuntu iyo iyadoo loo eegayo baahida iyo shuruudaha mid kasta uu qaadan karo go'aanka rakib ama ha dhigin. ugu dambeyntii waxaa jira waxyaabo badan oo diro ah.
Ujawaab Dr. byte
Waxyaabaha layaabka leh ayaa ah in bulshada ay wax isku qasaan. Kala badh adduunka ayaa u boodaya inay dhahaan "Jooji dhaleeceynta Ubuntu, waxay halis u galayaan inay Linux u keenaan dhagaystayaasha waaweyn." Faalladaasi (oo horeyba u ahayd mid caadi ah) waxay sifiican ugu habboon tahay "Dagaallada Mir" laakiin kuma jiro kiiskan gaarka ah. Waxa ugu xun halkan waa in waxa Ubuntu sameeyo uu ka soo horjeedo qiyamka iyo falsafadda Barnaamijka Bilaashka ah, adoo adeegsanaya astaantaada faafreebka, waa wax aad u hooseeya oo u qalma diidmo baahsan.
Halka Debian ay sii deysay xayiraad ku saabsan astaanteeda. Xun Ubuntu
Markaa Ubuntu fanboy waxay la yaabban tahay sababta inbadan oo naga mid ahi aynaan ugu dulqaadan karin Canonical guud ahaan…. dhammaan shirkadaha doonaya inay faa'iido helaan had iyo jeer waxay ku dambeeyaan inay wax qabtaan, Fedora oo leh qodobkaas ... Red Hat waa shirkad, Canonical leh tan, SUSE oo leh heshiiska M $, Linux Mint oo leh koodh kaas oo ku beddelay muusigga muusikada, wax walba oo lacag lagu kasbado…. Waxaan qirayaa in Debian, aysan cidna la xisaabtami karin.
Waxa kaliya ee ka maqanna waa la xisaabtanka Canonical ee Debian.
Taasi waa dhaqankiisa waana in la ixtiraamo respected
Anigu si aad ah ugama dhibin mashiinka raadinta ubuntu haddii aysan ahayn aragtidiisa, in kasta oo dhanka kale laga doonayo in la aqoonsado in mahaddii ubuntu GNU / Linux ay meel helayso sannadihii la soo dhaafay, wax walbaa ma aha ubuntu dabcan laakiin waa qaybta weyn. Hadda su'aashaydu waxay tahay, haddii aysan noo oggolaanayn inaan midnimada ku hagaajinno dhadhankeenna iyo dhadhankeenna, sidee ayay xor u tahay Ubuntu?
Iyo keenista wax dhib badan, maxaa yeelay waxay ka saareen erayga linux eraygooda.
Boosto aad u fiican.
Ku jawaab creeperNEX
Si kale haddii loo dhigo:
Waan ka xunnahay qoto dheer
Waa wax laga xumaado in la arko sida mar kasta oo Ubuntu u cadaadinayso midka kaliya ee si isxilqaan ah u doonaya inuu ka caawiyo midka kale qaabeynta nidaamka.
Wixii aan ka arko haddii jihada ay distoorradani qaadeyso aysan waxba iska beddelin waxaa laygu qasbi doonaa inaan u guuro mid kale oo aan lahayn iyo / ama sameeya riwaayado badan sida Ubuntu.
Ubuntu mar hore ayay lumisay xiisihii aan u qabay imaatinka midnimada. Hadda isaguna ixtiraamkaygii ayuu waayey.
Waa maxay wax laga xishoodo intee in le'eg ubuntu tagtay markaa waxaan u wareegay lint mint
Saaxiibbada, Mark Shuttleworth shaqsi ahaan wuu ka cudurdaartay dhacdadan: http://www.markshuttleworth.com/archives/1299
Sida laga soo xigtay isaga, waxay ahayd shaqaale bil ka yar Canonical u diray email noocan ah maamulaha goobtaas.
post xiiso leh! Maskaxda ayaan ku hayaa inkasta oo aan aad iyo aad uga sii fogaanayo Ubuntu ...
Sidee lagu xaqiijin karaa in markii la fulinaayay qoraalka ay shaqadeeda qabatay?; Waxaan ula jeedaa xannibaadda ama baabi'inta raadinta khadka tooska ah iyo wadaagista macluumaadkaas iyo waxyaabo kale.
Iyagu waa nidaamyo shaqeynaya, in kasta oo wax waliba jiraan, Ubuntu wali way ka xasilloon tahay Windows. Nasiib darrose ma laha barnaamijyo sida ay ku jiraan Windows-ka. Waa in Windows uusan waxtar lahayn. Waa BARNAAMIJYADII SADDEXAAD EE XISBIGA ee ka shaqeeya "nidaamka" la yiri
Runta sida guriga oo kale: haddii shirkado badani u sameeyaan barnaamijyo GNU / Linux waxyaabo aad bay uga duwanaan lahaayeen. Dad badan ayaa u maleynaya in shirkadaha ay u sameystaan ​​softiweer gaar ah Windows-ka sababo la xiriira tayadooda oo loo maleynayo inay tahay OS-ka ay dadka badankood adeegsadaan ama ka sii daraan, in Microsoft lafteeda ay sameyso barnaamijkaan.
Ku jawaab Baphomet
Desktop-ka Linuxero ee ugufiican: Nofeembar 2013